प्रेम र लीलाको मिलन बिछोडको कथा ट्रेलरमा - समाचार - साप्ताहिक
प्रेम र लीलाको मिलन बिछोडको कथा ट्रेलरमा
चलचित्र ‘प्रेमलीला’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फागुन १० गते देखी सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रको काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । प्रेमकथामा आधारित चलचित्रको ट्रेलरमा प्रेम भित्रको अनेक लिला समेटिएको छ ।
अन्तर्देशीय प्रेमकथा समेटिएको चलचित्रको ट्रेलरमा अभिनेत्री दिपशिखा खड्का र अभिनेता अली खान बिचको मिलन बिछोडलाई प्रमुख रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ट्रेलरमा अभिनेत्री खड्काका दुई रुप देख्न सकिन्छ । एकातिर उनी प्रेममा भएको धोकाको बदला लिने युवतीको रुपमा देखिएकी छिन् भने अर्को तिर अभिनेता मौसम खड्कासँग रोमान्टिक बनेकी छिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै दिपशिखा खड्काले चलचित्र निर्माण गर्नु निकै गाह्रो रहेको बताइन् । ‘हरेक कलाकारले एकचोटी चलचित्र निर्माण गर्नुपर्छ अनी बल्ल निर्माताको सास्ती बुझिँदो रहेछ’, खड्काको भनाई थियो । आफु महिला निर्मात्री भएकै कारण चलचित्र निर्माणको क्रमका निकै सास्ती बेहोर्नु परेको उनले सुनाइन् ।
पबन गौतमको छायांकन, चन्दन दत्त र सालिक दुलालको सम्पादन, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रमा महेश खड्का, नबिन कार्की र रबिराज शाहको संगीत, राजेश पायल राई, शोभा पाण्डे र भारतीय गायक राजा हसनको स्वर रहेको छ भने शब्द डा. कृष्णहरी बराल र डा. सागरको रहेको छ ।
चलचित्रमा दीपशिखा, अलि र मौसमसंगै सुरज तमु, रेखा शाह, शर्मिला शर्मा, प्रभाकर शर्मा, भारतीय कलाकारहरु अर्चना शुक्ला, ट्वीकंल श्रीवास्तव लगायतको अभिनय रहेको छ । अभिनेत्री खड्काकै कथा, पटकथा तथा संवाद रहेको चलचित्रलाई नानीमैया कार्की र फैजिल फिल्म्सले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् ।
चलचित्रको ट्रेलर :
प्रकाशित :माघ ५, २०७५
के गर्दैछन् मिलन चाम्स ?
अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धको अन्तरद्वन्द्व
चुपके चुपके निर्माणको पुरानो कथा
कथा पोस्टर ब्वाइको
गोविन्दको चित्त दुखाइ
आँचलको प्रेम एकान दुई कान मैदान
अष्ट्रेलिमा प्रमोद आश्विन ६, २०७६
नेपाल पत्रकार संघ हङकङमा किसन आश्विन ६, २०७६